सम्मान छ यी राष्ट्रसेवक कर्मठ जन प्रतिनिधिलाई ! चिल्लो गाडी गाडी रकम बाट जनताको लागि सेवापर्‍याउन गाउपालिकामा एम्बुलेन्स, प्रमुख भने मोटरसाईकलमा - Eall Nepal
सम्मान छ यी राष्ट्रसेवक कर्मठ जन प्रतिनिधिलाई ! चिल्लो गाडी गाडी रकम बाट जनताको लागि सेवापर्‍याउन गाउपालिकामा एम्बुलेन्स, प्रमुख भने मोटरसाईकलमा
मनोज पौडेल कपिलवस्तु- सामान्य पहिरनमोटरसाइकल चढेर गाउँपालिकाको काम सम्हाल्दै आएका छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ ।
धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।
। यहाँका १० स्थानीय तहमध्ये उनी मात्र मोटरसाइकल चढ्छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’
उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।। ६ नगर र ३ गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्ष वातानुकूलित गाडी चढ्छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो ।
जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।। कतिपय उपमेयर/उपाध्यक्षले गाडी सुविधा लिएका छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।।
कुनै तडकभडक छैनमोटरसाइकल चढेर गाउँपालिकाको काम सम्हाल्दै आएका छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो ।
जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।। यहाँका १० स्थानीय तहमध्ये उनी मात्र मोटरसाइकल चढ्छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो ।
जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।।
६ नगर र ३ गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्ष वातानुकूलित गाडी चढ्छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।।
कतिपय उपमेयर/उपाध्यक्षले गाडी सुविधा लिएका छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।।।
पदमा पुगे पनि सर्वसाधारणजस्तै देखिन्छन्मोटरसाइकल चढेर गाउँपालिकाको काम सम्हाल्दै आएका छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’
उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।। यहाँका १० स्थानीय तहमध्ये उनी मात्र मोटरसाइकल चढ्छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।।
६ नगर र ३ गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्ष वातानुकूलित गाडी चढ्छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।। कतिपय उपमेयर/उपाध्यक्षले गाडी सुविधा लिएका छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ ।
धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।।। सानाठूलालाई सरोवरी व्यवहार गर्छन् शुद्धोदन गाउँपालिका अध्यक्ष निसार अहमद खाँमोटरसाइकल चढेर गाउँपालिकाको काम सम्हाल्दै आएका छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ ।
धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।। यहाँका १० स्थानीय तहमध्ये उनी मात्र मोटरसाइकल चढ्छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ ।
धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।।
धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।।।
जिल्लामा गाडी नचढ्ने उनी एक्ला स्थानीय तह प्रमुख हुन्मोटरसाइकल चढेर गाउँपालिकाको काम सम्हाल्दै आएका छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।। यहाँका १० स्थानीय तहमध्ये उनी मात्र मोटरसाइकल चढ्छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ ।
धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।। ६ नगर र ३ गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्ष वातानुकूलित गाडी चढ्छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।। कतिपय उपमेयर/उपाध्यक्षले गाडी सुविधा लिएका छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।।।
मोटरसाइकल चढेर गाउँपालिकाको काम सम्हाल्दै आएका छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’
उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।। यहाँका १० स्थानीय तहमध्ये उनी मात्र मोटरसाइकल चढ्छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् ।
‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।। ६ नगर र ३ गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्ष वातानुकूलित गाडी चढ्छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो ।
जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।। कतिपय उपमेयर/उपाध्यक्षले गाडी सुविधा लिएका छन्स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् ।
‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।।
स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो । जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन ।’ उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउन परिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।
तपाईको स्वास्थ्यमा यस्ता किसिमका समस्या छन यसरी दहिको सेवन गर्नुहोस